IGabon Visa ekwi-Intanethi | I-ETA Visa yaseGabon | natvisa.com
Isicelo seGabon Visa kwi-Intanethi
I-visa ye-elektroniki eya eGabon iyafumaneka ekungeneni kwenye okanye kwi-Multiple yokungenela iindwendwe. Abantu babodwa kufuneka bagcwalise iinkcukacha zabo ezisisiseko ezichanekileyo nefoto yencwadana yokundwendwela ethathiwe kwiinyanga ezi-6 kungabikho mthunzi mva. Ukungenela okukodwa, i-eVisa isebenza inyanga enye ukuya kwezintathu, ngelixa ukuqinisekiswa kwamangeniso amaninzi ziinyanga ezi-6. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izandiso zilinganiselwe kwi-visa yaseGabon online. IGabon eVisa ifumaneka kuphela kubahambi abeza ngenqwelomoya kwisikhululo seenqwelomoya saseLeon Mba eLibreville.
Iindidi zeVisa zaseGabon
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli - Ukuya kwi-3 yeenyanga enye Faka isicelo ngoku
Ishishini le-eVisa Imeyli - Ukuya kwi-6 yeenyanga Zodwa / Zimbini Faka isicelo ngoku
Iyafuneka rhoqo ipaspoti
Umhambi owenza isicelo se-eVisa yabakhenkethi ukuya eGabon kufuneka abe Ipaspoti eqhelekileyo. Abantu abaneDiplomatic okanye naluphi na olunye uhlobo lwencwadana yokundwendwela esemthethweni abanakho ukwenza isicelo seVisa abakhenkethi. Iindwendwe zinokufaka isicelo sepaspoti yazo eqhelekileyo kwindlu yozakuzo ekufuphi nendawo abakuyo. Nje ukuba bafumane ipasipoti eqhelekileyo, banokugcwalisa iphetshana le-eVisa benze isicelo seVisa yabakhenkethi baye eGabon.
Amachweba avumelekileyo okufika
Iindwendwe ezihamba zivela kwamanye amazwe ziye eGabon, zivunyelwe ukuba zingene kumhlaba welizwe kuphela kwisikhululo seenqwelomoya. Abantu abaziindwendwe abakhenkethi banokundwendwela eGabon ngomoya kuphela, nge Isikhululo senqwelomoya saseLeon Mba eLibreville. Ukuzama ukungena kweli lizwe ngalo naliphi na ezinye izikhululo kuya kuthathwa njengokungekho semthethweni.
Abemi abavela kulo naliphi na ilizwe kwihlabathi liphela bangafaka isicelo soMkhenkethi we-eVisa, nangona kunjalo, kukho iimeko ezithile kumazwe athile. Iindwendwe ezivela eMorocco, eMauritius naseMzantsi Afrika azifanelanga i-eVisa. Iindwendwe ezivela kula mazwe kuya kufuneka zifumane i-visa eqhelekileyo ukuze ndityelele eGabon.
Wonke umntu ofaka isicelo se-eVisa eGabon kufuneka abe nepasipoti esemthethweni. Kufuneka isebenze ixesha elithile iinyanga 6. I-eVisa eya eGabon ivumela ukungena okukodwa elizweni. Iindwendwe zivunyelwe ukuba zihlale eGabon kangangeentsuku ezingama-30 emva kokufika kwabo.
Iinkcukacha zeGabon Visa
Yintoni iVisa abakhenkethi kwaye yahluke njani kwiVisa yakho yesiqhelo
Ukuqonda umahluko phakathi kwe-eVisa kunye ne-visa eqhelekileyo kubalulekile ukwazi ukuba i-visa lolona xwebhu lubaluleke kakhulu olufuneka umntu, ukuya kwilizwe langaphandle. Ligunya elinikezwe ilizwe lelo kubemi belinye ilizwe, ukubavumela ukuba bangene ngokusemthethweni elizweni kwaye bahlale apho kangangexesha elithile.
Ke ngoko, nabani na ocwangcisa uhambo oluya kwilizwe lasemzini kufuneka, kuqala, enze isicelo sevisa yabo. Umahluko omkhulu phakathi kwe-eVisa yabakhenkethi kunye neVisa eqhelekileyo yeyokuba le yangaphambili inokufaka isicelo kwi-intanethi kwaye yenzelwe abo banqwenela ukutyelela ilizwe ngeholide, ukuchitha ixesha labo kunye neshishini. I-visa eqhelekileyo inokuba kwiindidi ezahlukeneyo. Ungalukhetha uhlobo ngokuxhomekeka kwinjongo yakho yokutyelela ilizwe langaphandle. Ukufumana i-visa eqhelekileyo, umhambi kufuneka aqale enze i-aphoyintimenti kunye nozakuzaku emva koko aye apho ngokwasemzimbeni ukuba angenise iifomu kunye namaxwebhu.
I-eVisa yabakhenkethi kulula kakhulu kwaye kulula ukuyifumana ngokuthelekisa i-visa eqhelekileyo. Kuthatha ixesha elincinci kunye nemali ukwenza uxwebhu luqhubekeke.
Yintoni iVisa abakhenkethi abaya eGabon?
NgoJuni ngo-2015, urhulumente wase-Gabon wazisa i-Visa ye-elektroniki kuye wonke ummi kwilizwe lonke onomdla wokundwendwela eli lizwe. Ngesixokelelwano se-elektroniki, abafaki-zicelo banokufaka izicelo ze-eVisa yabakhenkethi baye eGabon, ukusuka naphi na. Ngokuchanekileyo xa ufaka isicelo se-Visa ukufumana amaxwebhu, yonke into inokwenziwa kwi-Intanethi.
Inyathelo Elokulandelwa ukulungiselela iGabon Visa kwi-Intanethi isicelo
Ukufumana i-visa eya eGabon kube lula kakhulu ngenxa yokungeniswa kwenkqubo ye-elektroniki. Inkqubo yokwenza isicelo kwi-Intanethi inokugqitywa ngamanyathelo ama-3 alula.
Gcwalisa ifom yesicelo: Isinyathelo sokuqala senkqubo yesicelo se-visa sigcwalisa ifom yesicelo. Unokuzikhuphelela le fomu kwiwebhusayithi karhulumente. Nje ukuba le fom ikhutshelwe kufuneka ubhale phantsi zonke iinkcukacha ngolwazi oluchanekileyo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Emva kokuba ifom igcwalisiwe, kuya kufuneka ungenise amaxwebhu. Njengoko le nkqubo ikwi-Intanethi, ungalayisha iikopi ezivavanyiweyo zamaxwebhu. Nangona kunjalo, amaxwebhu owafakayo kufuneka askenwe ngokucacileyo.
Yenza intlawulo: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo se-visa lihlawula umrhumo wevisa. Intlawulo inokwenziwa kwi-intanethi kusetyenziswa naliphi na ikhadi lekhredithi okanye ledebhithi elisemthethweni. Imali yokulungisa i-visa iya kugqitywa ngentlawulo. Nje ukuba isicelo senziwe, uya kufumana i-eVisa yakho eGabon kwiintsuku nje ezimbalwa.
Imiyalelo yabafakizicelo baseGabon eVisa
Ukundwendwela rhoqo: Ukufika kwabakhenkethi kuya kuthi kunikezelwe kuphela kubantu abanepaspoti eqhelekileyo. I-visa ayisebenzi kwabo bathwala i-diploma okanye naluphi na uhlobo lwencwadana yokundwendwela esemthethweni. Ukufumana i-Visa ye-Visa yeTyelelo (i-eVisa) yabakhenkethi, kufuneka ufumane ipasipoti eqhelekileyo kumagosa elo lizwe.
Indawo yokungena: I-EVisa yabakhenkethi ivumela abakhenkethi ukuba batyelele iGabon kuphela ngomoya kwisikhululo seenqwelomoya saseLeon MBA eLibreville.
Amazwe afanelekileyo: Onke amazwe kunye nemimandla yehlabathi jikelele ayakwazi ukwenza isicelo kubakhenkethi be-eVisa. Nangona kunjalo abahlali abavela eMzantsi Afrika, eMauritius naseMorocco abanakukwenza isicelo esifanayo.
Ipasi lokuhambisa: Abahambi kufuneka bahlale bephethe ipasipoti yabo kunye nabo. Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya saseGabon, kufuneka babonise ipasipoti yabo esebenzayo kunye ne-visa kwabasemagunyeni bokufika. Nangona i-visa ithunyelwa nge-imeyile kwii-ID zezicelo zabo bafake izicelo, bacetyiswa ukuba baphathe ikopi efanayo yokuhamba.
Ngelixa i-eVisa ilona xwebhu lubalulekileyo kwaye luyimfuneko ekuhambeni, ayizukunikezela ngokuzenzekelayo kubahambi ukuba bafaneleke ukungena kwilizwe laseGabon. Ukuba abasemagunyeni abangena kwisikhululo seenqwelomoya bafumana nantoni na enokuthi ichasane nokhuseleko lukazwelonke kunye nomdla, umntu lowo unokubanjwa.
Amaxwebhu ayimfuneko ukuze ufake isicelo eGabon Visa kwi-Intanethi
1. IFomu yesicelo kunye neFoto
Uxwebhu lokuqala ekufuneka umhambi alufumene kwifom yabo yokwenza isicelo se-visa kunye nefoto yomenzi-sicelo. Umntu kufuneka aqiniseke ukuba ifoto icacile kwaye umfanekiso womntu lowo unokumiselwa ngokulula.Lonke ulwazi kwifom kufuneka luhambelane nedatha yokundwendwela.
2. Ipasipoti yokuHlola
I-Visa iyakunikezelwa kubafaki-zicelo abanepasipoti eqhelekileyo esebenzayo kwaye ubuncinci beenyanga ezi-6. Ngokuxhomekeka kwiimeko ezichaziweyo, ukungena nokuhlala komntu lowo kuya kusebenza de kube lelo xesha. Iphepha-mvume lokundwendwela lingene kwindawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30. Abafaki-zicelo kufuneka bangenise ikopi yeskena sepasipoti yabo kunye nefom yesicelo.
3. Isiqinisekiso sikagqirha
Iindwendwe kufuneka zigonyelwe i-Yellow Fever ngaphambi kokuba zityelele eGabon. Kukwafuneka banikeze isatifikethi esingqina ukuba abathwali naluphi na usuleleko kwaye abanaso isifo esibulalayo. Injongo yokufumana esi siqinisekiso kukuqinisekisa ukuba abahambi abaze bazifumane bekwimeko enzima ukuba bayagula ngexesha lokundwendwela kwabo, kungekho mntu ubakhathaleleyo. Kwanabo bahamba nenkampani kufuneka baveze isatifikethi sabo sonyango.
Yintoni iVisa abakhenkethi yaseGabon?
I-eVisa luxwebhu olubaluleke kakhulu lokugunyazisa ukhenketho ekufuneka wonke umntu ohambela kwelinye ilizwe angene ukungena kummandla waseGabon.
Yintoni esebenzayo ye-Gabon eVisa?
I-eVisa yabakhenkethi yaseGabon isebenza ngokusemthethweni ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 emva kokufika kweli lizwe.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-eVisa yaseGabon?
Uya kucelwa ukuba ungenise la maxwebhu alandelayo ngesicelo sakho se-Visa -ikopi yencwadana yokundwendwela esebenzayo, ifoto yomenzi-sicelo kunye nesatifikethi sonyango.
Iindwendwe ziyacelwa ukuba ziveze la maxwebhu alandelayo xa ifika eGabon- ipaspoti yomenzi-sicelo eyayisetyenziselwa isicelo sevisa kunye nokuprintwa kwe-eVisa.
Iyiphi indawo yokungena yabahambi abatyelela iGabon?
Iindwendwe ziya kuvunyelwa ukuba ziye eGabon kuphela ngenqwelomoya, kwisikhululo seenqwelomoya esithile. Sisikhululo seenqwelomoya saseLeon MBA eLibreville.
Leliphi inani lokungena elivunyelwa yiGabon enye yeVisa?
Indawo esebenzayo yaseGabon iVisa ivumela ukungena kube kanye. Umenzi wesicelo onamandla unokundwendwela eGabon kube kanye, nge-visa yabo.
Yeyiphi imihlali ipaspoti yam ekufuneka ihlangane nayo ukuze ufake isicelo se-eVisa eGabon?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa eGabon, qinisekisa ukuba unayo incwadi yokundwendwela esebenzayo evakalayo kwiinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Ndiwuhlawula njani umrhumo we-eVisa yaseGabon?
Ungayihlawula intlawulo yokundwendwela kwi-intanethi ngokusebenzisa naliphi na ikhadi lekhredithi okanye elisebenzayo.
Emva kokuba isicelo senziwe, abafaki-zicelo baya kwaziswa malunga nokwamkelwa okanye ukwaliwa kwi-imeyile yabo ye-Id.
Ukuba isicelo sakho se-visa samkelwe, i-visa yakho iya kuthunyelwa ngeposi kwi-ID yakho ye-imeyile.